Forex Exchange updated: 29/06/2022 20:46
Yen kuti Dollar mutengo izvozvi pamusoro Forex Exchange pamusika pane 29 Chikumi 2022
20:46:39 (Forex zvazvingava update muna 59 seconds)
1 USD = 136.66 JPY
Mwero wekutsinhana we1 Yen kusvika ku US dhora panguva yekutsinhana kwe Forex = 0.01 USD. Iyo online Yen mwero wekutsinhana izvozvi kubva ku Forex. Nguva yekutsanya ye Yen kusvika ku US dhora chiyero. Shanduko mu Yen kusvika ku US dhora muyero ku Forex inogona kutaridzirwa kwenguva dzakasiyana dzenguva.
Forex wokutengesera chati US dhora - Yen kurarama, 29 Chikumi 2022
Forex wokutengesera chati Yen Kuti US dhora kurarama, 29 Chikumi 2022
Takaita chiyero chekutsinhanha chati che Yen ku US dhora iri peji. Kuwedzeredza manhamba ari nyore kutarisa pane chati. Iyo chaiyo Yen chiyero pane chati inogona kuwanikwa kana iwe uchifamba pamusoro payo. Iyo Yen chiyero chekutsinhana chinogadziriswa pakarepo.
Pindura Yen Kuti US dhora Yen Kuti US dhora Exchange zvazvingava Yen Kuti US dhora Gengi nhoroondo
Online zvokutengeserana Yen (JPY) kuti US dhora pari zvino
Shanduko mune ye Yen kusvika ku US dhora inogona kutariswa miniti yega yega. Shanduko iri mu Yen (JPY) kuenda ku US dhora muyero paminiti ino - 0.0000 USD. Nhoroondo yemari yekutsinhana mumaminetsi ekupedzisira inoratidzwa mune tafura. Kutumira kuri nyore kwemashoko padanho reminiti pane saiti.
Online zvokutengeserana Yen (JPY) kuti US dhora yokupedzisira awa wokutengesera
Kuchinjana rate nhoroondo kwese awa. -0.0000 USD - shanduko mu Yen (JPY) kusvika US dhora chiyero cheawa ino. Iyo saiti inoratidza tafura yekutumira maawa gumi e Yen ku US dhora kweawa imwe neimwe. Zviri nyore kuenzanisa shanduko mukutsinhana kwemaawa ega ega.
Online zvokutengeserana Yen (JPY) kuti US dhora yanhasi kuitika 29 Chikumi 2022
20:46 19:46 18:46 17:46 16:46 15:46 14:46 13:45 12:45 11:45